Sardinia: foiben'i Sannai Mirto
Home » Lahatsoratra farany farany » culinary » Sardinia: foiben'i Sannai Mirto
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • culinary • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Antonio Castelli, CEO, Sannai Mirto
Betsaka ny antony tokony handaminana fotoana fitsidihana an'i Sardinia ary izy ireo dia manomboka amin'ny divay tena mahaliana sy mahandro mahaliana ka hatrany amin'ny trano fandraisam-bahiny 4-5, yachts ary sambo, filomanosana, filentehan'ny masoandro ary ny fahafaha-manosotra soroka amin'ireo manan-karena (ary angamba malaza).
Antony iray mety tsy hiseho amin'ny lisitra 10 voalohany (fa tokony ho eo) ny fotoana hanandrana an'i Mirto. Raha toerana iraisam-pirenena vitsivitsy no manafatra an'io liqueur novokarina io dia sarotra be ny mitady any ivelan'i Sardinia sy Corsica.
Ny Mirto dia vita avy amin'ny zavamaniry miora (Myrtus communis) amin'ny alàlan'ny alikaola misy ny voaroy manga manga (mitovy amin'ny manga) na voaroy sy ravina. Ny voany dia maniry eo amin'ny kirihitra maitso kely izay mety hitombo hatramin'ny dimy metatra. Ny ravina dia misy menaka esansiela sarobidy ary ampiasaina amin'ny tanjona fanafody; ny egyptiana sy asyrianina tany am-boalohany dia nampiasa ny voaroy ho an'ny antiseptika sy anti-inflammatoire amin'ny fitsaboana fery.
Ao amin'ny angano grika, Myrsine, zazavavy kely, dia novan'i Athena ho hazo kesika satria sahy nikapoka lehilahy mpifaninana tamin'ny lalao izy. Myrtle dia nitaingenan'ny mpitsara Ateniana ary nanenona fehiloha nosoratan'ny olimpiana romana sy romana. Ho mariky ny fandriam-pahalemana sy ny fitiavana dia anisan'ny haingon-trano fampakaram-bady ny miora.
Ny voaroy manga lehibe dia oval lava ary manana endrika ivelany mamiratra. Rehefa madio dia malefaka sy manitra izy ireo. Eo ambanin'ilay hoditra manga mainty dia mena mena ny volomparasy ary feno voa kely miendrika voa
Mahita ny orona… Read ny lahatsoratra feno ao amin'ny divay.travel.